Rita, Writing for My Sake!: ဒေါက်တာ သန်းထွန်း (၉)
Posted by Rita at 8/03/2010 05:05:00 PM
ကျောက်စာဖတ်ချင်လို့ သမိုင်းမေဂျာယူမိတယ်။ ကိုယ့်အလှည့်ကျတော့ ကျောက်စာက မြန်မာစာမေဂျာ ထဲပါသွားတော့တယ်...။
သုတေသန မလုပ်တဲ့လူဟာ လူသွက် လူရည်လည် ဖြစ်မယ်၊ ဂိုက်ကောင်းမယ်၊ ဒါပေမဲ့ ငါက သူ့ကို လဍ္ဍူလို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီ လဍ္ဍူတွေပဲ ငါ့ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ရာထူး တက်တက်သွားလိုက်ကြတာ၊
Same as my life when I served in Govt. department.(Oceanographic Division)
The most Govt. servants are same.